थप ३०८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ३ को मृत्यु — Sanchar Kendra
काठमाडौँ । देशभर थप ३०८ जनामा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार ८ हजार ९०९ जनाको परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट २८१ र एन्टिजेन विधिबाट २७ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो ।
कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट थप ३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । हालसम्म देशभर ११ हजार ५१६ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा १ लाख ७७ हजार ८८४ जनाले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएका छन् ।
हालसम्म १ करोड ७५ लाख २१ हजार ५२३ मात्रा कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइसकिएको छ । यसमध्ये ८१ लाख ५३ हजार ७३४ जनाले पूर्ण मात्रा र ९३ लाख ६७ हजार ७८९ जनाले कम्तीमा एक मात्रा खोप लगाएकोो मन्त्रालयको भनाइ छ ।
एकैदिन १५ जनाको मृत्‍यु, थप ८,०१७ जनामा कोरोना संक्रमण
आज थप ८ हजार ४५४ मा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कति जनाको भयो मृत्यु ?
यस्तो आयो राष्ट्रियसभा निर्वाचनको ताजा मत परिणाम, कहाँ को विजयी ?
यी हुन् धेरै जनसंख्या भएका शीर्ष ५ सहर, विराटनगर परेन
सरकारद्वारा पशुपति धर्मशाला सञ्चालनको सम्झौता रद्द